January 2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Maung Pauk at 12:31:00 AM 0
Credit : မြန်မာစာအုပ်များစုစည်းမှု
Maung Pauk at 5:48:00 PM 0
Computer နဲ့ Recording လုပ်လိုသူတွေအတွက် Adrosoft Steady Recorder 3.1.1 Full Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
- Windows Vista and earlier versions support
- Editing the recorded waveform by cutting, copying, pasting, amplifying etc
Maung Pauk at 1:58:00 PM 0
Download : 352.3 MB
Maung Pauk at 1:43:00 PM 0
ဖျက်မိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Format ချမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Virus ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာပေးတဲ့ Recovery ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဗွီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ သီချင်းတွေအပါအဝင် ဖိုင်နစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကို အထောက်အပံ့ပေးပြီး ပြန်ရှာရာမှာလည်း မြန်ဆန်သွက်လက်ပါတယ်.
mmitdeveloper at 12:02:00 PM 1
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Android ဖုန်းထဲမှာGeneralလိုဂိမ်းလေးတွေဆော့ချင် ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများတွက်အာရှတိုက်မှာEmpireတွေတည်ဆောက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင် အောင် ကစားရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။ကျနော်တို့မြန်မာနိုင် ငံတောင် ပါသေးတယ်ဗျ။ကြိုက် ရာရွေးလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဆော့ချင် ရင် တော့ဒေါင်းလိုက်ကြပါ။
mmitdeveloper at 11:57:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အန္တရာယ်တွေကြားထဲကတန်ဖိုးကြီးဒေါ်လာတွေကိုနှုက်ယူရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။လျှင် လျှင် မြန်မြန်နဲ့စွန့်စွန့်စားစားဆော့ရတဲ့ဂိမ်းလေးပါ။လိုချင် ရင် တော့ကွန်းမန့်ပေးစရာမလိုဘဲဒေါင်းနိုင် ပါတယ်ဗျာ:P
mmitdeveloper at 11:53:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။Window Media FilesတွေကိုMP3ပြောင်းချင် တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်WMP TO MP3 Changerလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။လိုအပ်ပါကဒေါင်းနိုင် ပါပြီ။
mmitdeveloper at 11:49:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။PCမှာS kypeအသုံးပြုသူများတွက်Versionအသစ်လေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်။
Facebook Photo Comment အတွက် Viber Sticker အရုပ်ကလေးများ.... ( By - Ko Nay )
Ye Naing at 4:05:00 PM 2
Credit to - Ko Nay
Facebook မှာ Viber မှ Comment Photos တွေနဲ့ ရုပ်ပြောင် Comment ပေးလို့ရအောင်
Viber Comment Photo တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...။
Free ရတဲ့ ပုံတွေပါပဲ Folder အလိုက်ခွဲထည့်ပေးထားပါတယ် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံကိုရွေးချယ်ပြီး Comment ပေးရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ... အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ ...။
mmitdeveloper at 9:30:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။ဒီဂိမ်းလေးက တော့ကြာပါပြီ။ဒါပေမယ့်ဟော်ကီဝါသနာအိုးတွေတွက်တော့မရိုးနိုင် လောက်ပါဘူး။Computerနဲ့ကိုယ်နှစ်ဖက် ရိုက်နိုင် သလိုဖုန်းတစ်လုံးထဲနဲ့လူနှစ်ယောက်ကစားနိုင် ပါသေးတယ်ဗျာ။ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဖြစ်ဖြစ်သူငယ်ချင်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆော့လို့ရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။အောက်မှာဒေါင်းနိုင် တယ်နော်။
mmitdeveloper at 9:25:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Livewallpaperကောင်းကောင်းလေးတွေမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုသူများတွက်Zebraကောင်းလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်တစ်ချက်ပွတ်တိုက်လိုက် ရုံနဲ့အ နောက်ကသံစဉ်အတိုင်းကမယ့်Zebra LWPလေးပါ။
mmitdeveloper at 9:18:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Internet Securityတွေထဲမှတမူထူးခြားပြီးအမှန်ကန်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပေးတဲ့ကောင် လေးပါ။နာမည်လေးကိုတော့ရင်းနှီးကြမှာပါ။ဒါကတော့Releaseထွက်လာတာပါ။
mmitdeveloper at 9:13:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။PCမှFolderတွေကိုခွင့်မပြုဘဲတခြားသူတွေမ တွေ့ရမမြင် ရ အောင် ဖွက်ထားပေးမယ့်Toolကောင်းလေးပါ။အသုံးပြုရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်။ကိုကိုတို့ရဲ့မမြင် စေခြင် တဲ့ဓါတ်ပုံ VideoတွေကအစHideလို့ရပါတယ်ဗျာ....ငိငိ....;)
mmitdeveloper at 9:08:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။အင် တာနက်ပေါ်မှHD ဇာတ်ကားတွေကိုတိုက် ရိုက်ကြည့်ရူနိုင် မယ့်Appလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အောက်မှာဒေါင်းကြပါခင် ဗျာ။
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။၃၆၀ကင် မရာမှာသရဲပုံလေးတွေနဲ့လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးက တော့ဓါတ်ပုံတွေမှာသရဲပုံတွေကိုစိတ်ကြိုက်မိမိကြိုက်နှစ်သက် ရာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။အ ပျော်သ ဘောစခြင် | နောက်ချင် ရင် တော့ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ကြပါတော့နော်။
mmitdeveloper at 8:58:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။PCမှာMini Gamesလေးတွေကစားရတာသ ဘောကျသူများတွက်ပါ။ဒီHalloween Gameလေးကအရင် ဟာလေးနဲ့မတူပါဘူး။အသစ်က လေးပါ။ကဲဗျားးးးဆော့ချင် ရင် တော့ယူလိုက်တော့နော်။
mmitdeveloper at 8:53:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာခင် ဗျာ။Microsoft Security Release ISO ImageလေးUpdateပုံစံနဲ့အသစ်လေးထွက်လာလို့တင် ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်။
mmitdeveloper at 6:36:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖုန်းနဲ့ခြင် နှိမ်နှင်းမယ့်Apkလေးတစ်ခုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ရမရ တော့ကျနော်မသိ။စမ်းကြည့်တာတော့မရ။ဟီးးးး။ဒီApkထဲမှာရေးထားတော့Installလုပ်ပြီးဖွင့်ထားလိုက်ပါတဲ့။ဖွင့်ထားတဲ့အသံကိုကျနော်တို့မကြားရဘဲခြင် ဘဲကြားရပါလိမ့်မယ်တဲ့။အသံခြင် ကြားရင် ခြင် ပြေးပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ကျနော်စမ်းကြည့်တာတော့မရဘူး။သူငယ်ချင်းတို့စမ်းချင် ရင် တော့ယူသွားလိုက်ကြ ပေါ့နော်။
mmitdeveloper at 6:31:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာ။Samesung Iconလေးတွေကိုယှဉ်တွဲပြီးကစားရမယ့်Gameလေးပါ။ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။လွယ်ကူတဲ့Gameလေးတစ်ခုပါ။အပျင်းပြေ ဆော့ချင် ရင် တော့ယူသွားလိုက်ကြပါ။
mmitdeveloper at 6:25:00 PM 0
Myanmar IT Sky at 3:22:00 AM 1
မောင်ပေါ်ထွန်း ရဲ့ အမြန်ဆုံးသူဠေးဖြစ်နည်းစာအုပ် pdf ကို မြန်မာ့စာအုပ်စင် မှာတွေ့လို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. သူဌေးဖြစ်လိုသူများ ဒေါင်းယူဖတ်ရှုပြီး သူဌေးမြန်မြန်ဖြစ်ကြပါစေ.. သူဌေးဖြစ်ရင် မောင်ပေါက်ကိုလည်း မမေ့ကြနဲ့အုံးနှော်..
Maung Pauk at 6:34:00 PM 0
Windows PC သုံးသူတွေဟာ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Windows တွေရဲ့ ပျက်စီးမှု၊ ပြောင်းလဲမှု၊ တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကို တစ်ခုချင်း လိုက်ပြီး ပြုပြင်နေဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး.. သာမန် user တစ်ယောက်အနေနဲ့ မပြောနဲ့. အဆင့်မြင့် user တွေတောင် ကိုယ့် Windows ကြီး ကောင်းမွန်နေဖို့ ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နေဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး.. ဒါကြောင့် System Utilities တွေကို အသုံးပြုကြရပါတယ်.. Advanced SystemCare ကတော့ နာမည်ကြီး System Utilities တစ်ခုဖြစ်ပြီး Windows တွေကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပေးပါတယ်.. Error တွေကို ရှင်းလင်းပေးပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်.. Feature တွေကို ရေးပြရရင် ဒီစာမျက်နှာတောင် ဆံ့မှာမဟုတ်တော့ မပြောပြတော့ပါဘူး.. အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ..
သတိ- ကီးဖြည့်စဉ်မှာ အင်တာနက်ပိတ်ထားပါ..
With improved real-time optimization technology, Advanced SystemCare7PRO is your best choice to boost your slow PC and internet up to 300% faster. And new Real-time Protector is now included to protect your PC against malware and other threats. Whenever you run your computer, your privacy is guaranteed with enhanced cleaning technology.
Download : 33.99 MB
Myanmar IT Sky at 2:01:00 AM 0
စကားအရေးကြွယ်ဝစုံလင်စွာ ပြောနိုင်ဆိုနိုင် ပြောရန်ဆိုရန် နှင့်
သုတအဖုံဖုံရလိုသူများ အတွက် ဦးပေါ်ဦးနှင့်လှတာသားတို့ရဲ့
Myanmar IT Sky at 4:26:00 AM 0
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်မင်းသားချော
အခုတော့ ဦးကျော်သူရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပေါ့.
( ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်စာအုပ် )
အရမ်းကြီးတော့ နှစ်ပိုင်းခွဲ တင်ပေးထားပါတယ်...
DOWNLOAD Part (1)
DOWNLOAD Part (2)
Unknown at 9:45:00 PM 2
ကလစ်တစ်ချက်တည်းနိုပ်တာနဲ့လက်တော့မှာ blue screen error ကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့RegCure pro
ကျနော်ကတော့ အမြဲသုံးလို့ ၇အောင် crack file လေးကိုထည့် ထားပေးပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း patch ချိုးပေးပြီး အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ဒီကောင်လေးကို windows 32 bit &amp; 64 bit နှစ်မျိုးလုံးမှာ အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်.....ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ စက်ရဲ့systrem error , Malware ,junk file ,pivacy issue စတာတွေအပြင်တော်တော်များများကို ယူပစ်သလိုပျောက်သွားအောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ုဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့( 7MB ) ပါခင်ဗျာ...
Unknown at 9:14:00 PM 0
mmitdeveloper at 9:33:00 AM 1
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကွန်ပျူတာမှတဆင့်ဖုန်းထဲကContact,Apk,Files,SMS,Browser historyစတာ တွေကိုအ ကောင်းမွန်ဆုံးBackup and Restoreလုပ် ပေးနိုင် တဲ့Toolကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ဒါ့ပြင် Mobine Managementအ နေနဲ့လဲလုပ်ဆောင် ပေးပါသေးတယ်။ကျနော်ကအခုစမ်းကြည့်တာတောင် တော်တော်ကောင်းတယ်။မိတ်ဆွေတို့လဲသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ။
mmitdeveloper at 8:30:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Super Duper Notepadလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ကာလာလေးနဲ့ဆိုတော့လှတာပေါဗျြာ။ကာလာတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင် ရုံသာမကပုံတွေကိုပါထည့်သွင်းလို့ရတဲ့Notepadလေးပါ။
mmitdeveloper at 8:24:00 AM 0
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။PCမှာဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေကစားချင် ပါတယ်ဆိုသူများတွက်အရမ်းအကြမ်းဆော့ရမယ့်ဂိမ်းလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။3Dရုပ်ထွက်ဆိုတော့ဆော့ရတာကောင်းမှကောင်းဗျာ;)
mmitdeveloper at 3:20:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Sony ဖုန်းကိုင် ဆောင် ကြတဲ့မိတ်ဆွေများတွက်Sony Font Changerလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါလေးကိုအသုံးပြုချင် ရင် တော့မိမိတို့ ဖုန်းမှာRoot Accessတို့လိုတယ်နော်။
mmitdeveloper at 3:13:00 PM 1
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မကြာမှီလအနည်းငယ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲကြီးနီးလာပါပြီ။ဒါလေးက တော့ဘရာဇီးကမ္ဘာ့ ဖလားကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ထွက် ရှိလာတဲ့ဂိမ်းလေးပါ ။ခြေစစ်ပွဲအောင် ၃၂နိုင် ငံသောဘောလုံးအမှတ်တံဆိပ် လေးတွေကိုစပ်ပေးရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။ဘောဘောဝါသနာအိုးတွေတွက်တော့လွယ်မယ်ထင် ပါတယ်။ဒါလေးကိုမ ယူခင် ကွန်းမန့်လေးတော့ပေးသွားပါနော်။
Ye Naing at 12:05:00 PM 2
Download Link : DOWNLOAD VIA MEDIAFIRE
Here, I've to thank and give credit to U Maung Naing who shared the link on facebook.
mmitdeveloper at 3:31:00 PM 6
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Browserကောင်းကောင်းသုံးချင် ပါတယ်ဆိုတဲ့သူများတွက်KBသာသာတာရှိတဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့Browserလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ Functionsတွေအများကြီးပါဝင် ပြီးKBသာသာရှိလို့Pro လို့ခေါ်လိုက်တဲ့Browserလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော်။
mmitdeveloper at 3:27:00 PM 4
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Livewallpaper ကောင်းကောင်းလေးတွေမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုသူ များတွက်အမြင် ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တဲ့LWPလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နော်။အသံစနစ်ပါ ပါတဲ့ LWPလေးတစ်ခုပါ။အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပေါ့နော်။